Fomba roa tena mandaitra hampitomboana ny lisitry ny mailaka | Martech Zone
Alarobia, Septambra 14, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
Mampitombo ny programa mailaka mailaka ataonay izahay ary manana fieken-keloka hataoko… ampiako olona ny anay Martech Zone Newsletter isan'andro. Raha ny marina dia nitombo efa ho 3,000 ny mpanjifa tato anatin'ny volana vitsivitsy! Ny tena zava-dehibe, ny fifamoivoizana dia mitarika ny mpamaky hiverina any amin'ny bilaoginay sy amin'ireo mpanao dokambarotra sy mpanohana anay. Raha tsy manana programa mailaka hisamborana olona ianao ary hamerina azy ireo amin'ny tranokalanao, bilaogy na marika… dia very mpanjifa be dia be ianao.
Ny fomba roa haingana indrindra amin'ny fampiroboroboana ny lisitry ny mailaka dia:
Manampy ny fifandraisana rehetra mifandraika Tonga tao aminay tamin'ny alàlan'ny tranokalanay na mailaka izany. Anisan'izany ireo matihanina amin'ny fifandraisana amin'ny daholobe izay mifandray aminay mba hampiditra hevitra momba ny famoahana bilaogy (isaky ny ora).
Manampy ny rehetra ao amin'ny tambajotranoko - avy amin'ny bokiko adiresy ary na i LinkedIn aza. Mahaliana fa nahatratra fantsona kely aho avy amina lehilahy afaka nanatitra mailaka nampidiriko tokony ho 6 volana lasa izay… saingy tsy nampiditra ny mailaka tao amin'ilay folder Junk izy, tena nihanatanjaka fotsiny izy, niantso ahy anarana tamin'ny Internet, ary lasa nandeha (soa ihany ).
Tena mandeha tsara izy io ka iriko raha manana fitaovana mandeha ho azy hampandehanana azy io hiasa. Maniry aho raha manana fitaovana iray izay nanangona ny mailaka miditra rehetra ary nampiditra azy ho azy teo amin'ny lisitry ny mailako. Mahaliana tokoa, hitako izany GetResponse dia nanampy fampidirana mitovy amin'io ao anatin'ny sehatra mailaka ataon'izy ireo. Eo ankavanana dia ny loharano rehetra azon'ny mpampiasa GetResponse misintona mpamandrika.
Raha mandray ny mailaka ny mpikirakira vaovao ary tsy tiako izany? Tsy misy ahiahy - afaka misoratra anarana tsotra fotsiny izy ireo. Fomba ekena eo amin'ny sehatry ny indostria io… fa tsy atoro matetika. Raha mieritreritra ianao fa mampihoron-koditra (toy ny ankamaroan'ny matihanina amin'ny fandefasana mailaka), tsy raharahako izany. Samy mampitombo ny bilaoginay aho, mampitombo ny fifamoivoizako mankany amin'ilay tranokala ARY mbola mitazona ny tahan'ny fisokafana sy tsindrio amin'ny isa ihany koa aho. Ary koa, manohy manana tahan'ny fitarainana 0% aho ary ny tahan'ny tsy fisotroan-dronono dia 0.41% tamin'ny mailaka farany nalefako.
Ny lakilen'ny rehetra amin'izany, mazava ho azy, dia roa sosona:
The kalitaon'ny atiny ao amin'ny mailakao. Misy ifandraisany. Tonga ara-potoana. Ary fampahalalana sy natao ho an'ny matihanina. Nampiroborobo hetsika mihitsy aza ity mailaka farany ity. SADY TSY nahazo fitarainana tokana aho, olona mpivady niova fo!
The volan'ny mpanjifa vaovao Ampiako isan-kerinandro dia kely dia kely. Tsy manipy mpanjifa 10,000 'hitako' tao anaty lisitry ny mailaka aho… Manampy mpamandrika 20 ka hatramin'ny 50 isan-kerinandro ao aminy… momba ilay volabe izay ampidirin'ny gazety an-gazety.
Tena nanova ny toe-tsaiko manontolo amin'ny marketing amin'ny mailaka izany. Tsy manana opt-in indroa intsony aho ary manampy ny mailaka rehetra ifandraisako amin'ny matihanina. Mahatonga ahy hanontany tena mihitsy aza hoe izao na tsia ny fotoana ahazoako ny lisitry ny matihanina amin'ny marketing. Raha manao an'izany aho dia dia mandefasa taratasy fanasana sao atahorana handratra ny lisitra nataoko.
Tsy azoko antoka hoe maninona ny mpivarotra mailaka rehetra no tsy manampy an'io amin'ny fanangonana fitaovana. Kudos ho an'i GetResponse… Noheveriko fa nitombo ny lisitra nataoko. Toa mialoha ny lalao ry zareo.
Ahoana ny fomba hahitana consultant SEO
Sep 15, 2011 amin'ny 2: 19 AM
Hevitra tena sahy! Saingy ny lafiny mifanohitra - raha ny fifandraisana matihanina rehetra nampiako ahy tao amin'ny gazetiny nefa tsy nangatahiko / nanome alalana - dia ho sosotra be aho.
Ampio izany - ny lohahevitrao - ny votoatinao dia zavatra hankafizan'ny rehetra. Heveriko fa tsy azo ampiharina amin'ny indostria rehetra io torohevitra io.
Sep 15, 2011 amin'ny 7: 59 AM
Voadona ny lohanao ry Bobbie a! Tsy maintsy misy ifandraisany ihany izy io, fa tsy maintsy misy lanjany ho an’ny mpihaino.
Sep 15, 2011 amin'ny 1: 44 AM
Doug, matetika aho vao namaky lahatsoratra tao amin'ny mpamaky RSS-ko, fa ity iray ity dia nahatalanjona mba hanajanonana sy haneho hevitra. Manaiky 100% aho ary marary amin'ny mailaka nazi miezaka ny hanasarotra ny vokatra rehefa miditra kokoa ny media hafa rehetra.